Uthini umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Uyintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti. Phantse iminyaka eyi-1800, icawe Umpostile wamaRoma Katolika ibingoyena mntu usasaza umyalezo kaYesu waseNazarete. Nangona kunjalo, ekuqaleni kwenkulungwane yeshumi elinesixhenxe, kwabakho umsantsa ngenxa Uhlaziyo olwenziwa nguMartin Luther Ndizamile ukwazisa ecaweni.
Uhlaziyo lukaLuther aluzange lwamkelwe yiCawa yamaKatolika kwaye oku kwavelisa ukwahlukana okwadala ukuba iyantlukwano phakathi kwamaKatolika namaProtestanti. Nangona iziseko zeenkolelo zabo zifana, kukho amanqaku athile ahlukileyo.
Ukufumanisa ukuba ziyintoni, qhubeka ufunda eli nqaku.
1 Uyintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti: umahluko o-7
1.1 1. Ubungcwele beNtombikazi enguMariya
1.2 2. Ukuhlonitshwa kwabaNgcwele
1.3 3. Ukungatshati okusisinyanzelo
1.4 5. Ingqiqo yeCawa
1.5 4. Utyalo-mali lwepapa yintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti
1.6 5. Ingqiqo yobubingeleli
1.7 6. UMthendeleko (iSidlo esingcwele) yintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti
1.8 7. Ubhaptizo
Uyintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti: umahluko o-7
Emva koko siza kubonisa uthini umahluko phakathi kwamaKatolika kunye nabaprotestanti ngumahluko ophambili. Ukusuka Fumanisa kwi-intanethi Siza kuwujonga lo mbandela ngokwembono ngaphandle kokuya kubuza ubunyani beemfundiso zawo.
1. Ubungcwele beNtombikazi enguMariya
Icawa yamaKatolika ithathela ingqalelo unina kaYesu a intombi eyintombi ekhululekileyo isono sokuqala. Ukusuka kwiMariya Dogma kuthathelwa ingqalelo ukuba nguMariya uyakwazi ukulamla phakathi kukaYesu nomntu, ke bamnika i Inqanaba elingcwele kwaye licocekile.
Nangona kunjalo, ukusuka Icawa yeVangeli ilawula umbono wokuba uMariya wayeyintombi enyulu kwaye unokulamla ngendoda. Uhlonitshwe njengoMama kaYesu kwaye uyabulelwa ngokwazi ukwamkela umsebenzi onzima wokukhulisa uNyana kaThixo, kodwa ngenxa yobungcwele bakhe obungaboniswanga eBhayibhileni., isikhundla awasinikwa yiCawa yamaKatolika silahliwe ngokupheleleyo.
2. Ukuhlonitshwa kwabaNgcwele
AmaKatolika acinga ukuba zikhona abantu abangumzekelo abanako ukufezekisa ubungcwele ngenxa yezenzo ababenazo ngexesha lokuphila kwabo. NjengoMaria, aba bantu banjalo uyakwazi ukusithethelela phambi koThixo. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba ubathandaze kwaye ubanqule. Okwangoku, zingaphezulu 4.000 abangcwele ngubani onokucelwa ukuba asithethelele. Ngapha koko, oku kunokwenzeka yenza izinto ezinemifanekiso yakho ukuxhobisa nokukhuthaza abantu ukuba balandele emkhondweni wakhe. Obu budlelwane phakathi kwabangcwele, izinto ezingcwele kunye nomthandazo kuthiwa yi-iconoclasm.
Icawa yeVangeli iyayikhaba ngaw 'omane le nto bayibona ingavisisani nezibhalo. Ekuvukeni koHlaziyo lwamaLuthere, umntu ngamnye makathethe noThixo ngqo. Ke ngoko umlamli yedwa uyakwazi ukusilamla ngenxa UYesu ubala. Kwelinye icala, naluphi na uhlobo lwe ukunqulwa kwemifanekiso eqingqiweyo njengoko kwenzekileyo nethole legolide elinxulumene nemfuduko.
3. Ukungatshati okusisinyanzelo
Ukungatshati kubhekisa kwi- Ndithembisa ukuhlala ndodwa kunye ukungazenzi naluphi na uhlobo lwesenzo sesondo. Kungenxa yesenzo esixhaphakileyo kwezinye iinkonzo ezininzi kwaye sichazwa njengesenzo sokunyaniseka kuYesu. Enye enye indlela yokulandela amanyathelo awathathayo. Nangona ingachazwanga ngendlela epheleleyo kwibhayibhile, ukuba yenziwe nge Ikatekizimu yamaKatolikaKe ngoko, yinto esisinyanzelo kwabo banqwenela ukukhonza uThixo ngeCawa yamaKatolika.
Kwelinye icala, ukusuka Icawa yeVangeli se ukwala ukungatshati njengembopheleleko ukukhonza uThixo. Ukusuka kwimfundiso yamaLuthere kuphikiswana ngokuthi akukho akukho sicatshulwa seBhayibhile sithetha ngokungatshati njengemfuneko eyimfuneko ekukhonzeni iNkosi. Nangona kunjalo, ngokuzithandela yokungatshati.
5. Ingqiqo yeCawa
La Icawa yamaKatolika ilawulwa phantsi kwesigqibo sokuziphatha esinyanzelwe kwi ICatechism, oko kuthetha ukuba ukuze ibe yiCawa yamaKatolika kufuneka ithobele imigaqo eboniswe kuyo. Baqwalaselwe njenge ibandla jikelele kwaye inguye kuphela olandela Ukulandelelana kwabapostile ngomfanekiso kaPapa.
Las kwavela iicawa zevangeli ngoHlaziyo lwamaLuthere, abanazo i-decalogue emanyeneyo. Ngesi sizathu kukho Iicawa ezingenakubalwa ezinemigangatho eyahlukileyo. Nangona kunjalo, bonke bazithatha njengabavangeli.
4. Utyalo-mali lwepapa uthini umahluko phakathi kwamaKatolika kunye nabaprotestanti
KwiCawa yamaKatolika, i UPapa lilandela lompostile uPetros, Ngumfanekiso obizwe nguYesu njengelitye leCawe yakhe. Ukuqala ngoPopu, sifumana ulawulo lwabaphathi apho sifumana khona oobhishophu, abefundisi, nabadikoni abathi Bayabizwa kwaye bayenzeka okokoko kwaqala icawe.
Nangona kunjalo, kwiCawa yamaProtestanti, eneengcinga ezisekwe kumgaqo we ukubhala okukodwa (Iskripthi sokuqala) oku kulandelelana ngokulandelelana iphikisana ngokupheleleyo nengxelo yebhayibhile, kwaye ke, ayinyamezelwa. Ngaba uqala ukuqonda ukuba yintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti?
5. Ingqiqo yobubingeleli
Nawuphi na umKatolika, ububingeleli lulandelelwano lobupostile olungcwaliso kufuneka lugqitywe nge ukuqeshwa kweziko lakho. Ngale ndlela, xa sele betyunjwe yicawa, bafumana Amandla kaThixo okusasaza nokukhusela iLizwi.
Nangona kunjalo, iBandla leVangeli lijonga ukuba indima yobubingeleli ingahanjiswa nangaliphi na ikholwa ngentando kaThixo kwaye yenzelwe yona Akukho hlobo lokungcwaliswa luyimfuneko iziko.
6. UMthendeleko (Isidlo esingcwele) uthini umahluko phakathi kwamaKatolika kunye nabaprotestanti
La UMthendeleko o Santa Cena ubhekisa kwi umsitho omele ukufa nokuvuka kukaYesuSifuziselwe isidlo sangokuhlwa sikaYesu nabapostile bakhe kubusuku bangaphambi kokubethelelwa kwakhe.
KwiCawe yendalo yonke, uMthendeleko unakho kuphela yenziwa ngombingeleli omiselweyo kwiziko lamaKatolika. Ngumbingeleli kuphela onokuthi aguqule isonka newayini emzimbeni negazi likaKristu. Yi umbhiyozo wamaKatolika kuphela ekungekho nelinye ilungu ngaphandle koluntu elinokuthatha inxaxheba. Intsingiselo yayo yokuqhubeka ihleli Ukuphindaphindwa kwedini likaYesu.
Ku Icawa ehlaziyiweyo, yenziwe nge intsingiselo yesikhumbuzo. Yintoni egqithisile nabani na obhaptiziweyo angathabatha inxaxheba yombhiyozo ngaphandle kokukhetha ngaphandle kokholo ngokwalo.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni umahluko phakathi kwamaKatolika namaProtestanti, ubhaptizo yenye yezo yantlukwano. Kuzo zombini ezi nkonzo i umthendeleko wobhaptizo, kodwa ukumila kuyahluka kakhulu.
KumaKatolika, kufuneka ubhaptizo okoko ezelwe, kunye nomsebenzi wayo kuku Yahlula usana kwisono sokuqala, kuba umntu uthathelwa ingqalelo njengomoni kwasekuzalweni kwakhe. Kwakhona, kufuneka ibe Ngumbingeleli omiselweyo ngokusebenzisa a ifonti yokubhaptiza, ukutshiza amanzi entlokweni yalentwana incinci.
Kwicawa ehlaziyiweyo intsingiselo iyahluka kakhulu. Bacinga ukuba ubhaptizo kufuneka lwenzeke ngokuzithandela. Ukuba akukho myolelo kubhaptizo awunantsingiselo igqithileyo. Ukongeza, indlela esetyenzisiweyo kukusebenzisa Ukucwiliswa komzimba kwisifundo.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uqonde uthini umahluko phakathi kwamaKatolika kunye nabaprotestanti. Kungenzeka ukuba siphose esinye isizathu. Ukuba kunjalo, ndiyakubongoza ukuba ubhalele i-imeyile yethu ukuze uqhubeke nokugqiba eli nqaku. Ukuba ngoku ufuna ukwazi izizathu zembali kutheni ibhayibhile luxwebhu oluthembekileyo lwe-100%, gcina ukhangela i-Discover.online.